Raharaha 7 Febroary : 600 tapitrisa Ar ny trosa hitsoahan-dRavalomanana -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha 7 Febroary : 600 tapitrisa Ar ny trosa hitsoahan-dRavalomanana
12/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy misy sy manam-piovana hatramin’izay hatramin’izao ingahy Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-dia aminy. Omaly mantsy ny fitsarana ny raharaha mahakasika ny fitorian’ny AV7 an’ity Filoha teo aloha ity, sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim) sy ireo mpomba azy momba ilay lamandy tokony nefain’izy ireo tamin’ireo niharam-boina tamin’ny « Raharaha 7 Febroary 2009 ».
Tsiahivina mantsy fa mitentina 600 tapitrisa Ar ny onitra takian’ny eo anivon’ny AV7 amin-dry Ravalomanana sy ny forongony mahakasika iny « Raharaha 7 Febroary » iny. Fitsarana efa tokony ho nizotra sy notanterahina ny taona 2010 izy ity saingy, tsy tanteraka izany raha tsy tamin’izao vanim-potoana izao.
Rehefa nohainoan’ny mpitsara, tao amin’ny Efitrano Fahafito, ny mpisolovava ny andaniny sy ankilany omaly, nanambaran’ny mpitsara tamin’izany àry fa ny 28 desambra izao no hivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha.
Raha ny mahakasika ny fitsarana omaly hatrany, dia nanambara ny mpisolovava avy amin’ny AV7 fa nanao fanoherana ny « saisie-arrêt » ny avy amin-dry Ravalomanana saingy, nambaran’iry mpisolovavan’ny mpitory fa tsy nanaja ny fe-potoana fanaovana izany izy ireo, araka ny voalaza rehetra anatin’ny Lalàna fototra 2014-036 amin’ny an-dalana faha-33.
Atsipy any amin’ny CFM
Ankoatra izay, rehefa nandeha ihany ny fihainoana ny mpisolovavan’ny andaniny sy ny ankilany, nanipy ny fandoavana ilay lamandy sy onitra any amin’ny Filan-kevitry ny Fampihavanana Malagasy (CFM) ny avy amin-dry Ravalomanana sy ry Ralitera, sns. Namaly avy hatrany kosa ny avy amin’ny AV7 , fa tsy misy lalàna manambara fa misolo sy mahasolo ny Fitsarana ny CFM.
Izany dia manamafy tanteraka fa mitsoaka ilay trosa misavovona eo an-tampon’ny lohan’izy ireo ry Ravalomanana sy ny forongony. Manaporofo ihany koa fa mitsoaka adidy sy andraikitra. Raha ny marina mantsy, dia tsy misy tokony hidiran’ny CFM mihitsy ny fandoavana io onitra io takian’ny AV7 amin-dry Ravalomanana io. Hita amin’izany fa ahodinkodina ho lasa « dosie » politika indray ity raharaha fitorian’ny AV7 ity.
Marihina mantsy fa anisan’ny nanaovan-dry Ravalomanana sy Ralitera, sns, fanoherana ny fanakatonan’ny Fitsarana ny “compte” misy ny petra-bolan’izy ireo any amin’ny banky. Raha ny voalaza hatrany, dia miisa 19 ireo olona voasaringotra amin’ity raharaha ity, izay miaraka amin’ingahy Marc Ravalomanana. Andrasana, araka izany, ny fivoahan’ny didim-pitsarana, ny 28 desambra izao.
Nigadona an-tanindrazana, ny talata 6 Desambra teo, ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina rehefa avy niatrika ny Conférence des Bailleurs tany Paris, France, ny 1 sy 2 desambra 2016 teo. Nitondra fanazavana mikasika ny fahazoantsika ilay famatsiam-bola ...Tohiny